Alshabaab oo Canshuur 13 Milyan Dollar ah ku urursatay 9 Bilood iyo Banki caan ah oo.. (Warbixin Q/Midoobay) | Somalia News
Alshabaab oo Canshuur 13 Milyan Dollar ah ku urursatay 9 Bilood iyo Banki caan ah oo.. (Warbixin Q/Midoobay)
Warbixinta Guddiga Q/Midoobay oo uu helay Wargeyska caanka ah ee New York Times ayaa ka qoray qormo ku saabsan warbixinta Guddig oo lagu sheegay in Al-Shabaab ay awood u leeyihiin adeegsiga lacagta taleefoonada lagu diro EVC, isticmaalka bangiyada siiba Salam Somali Bank, ayna maalgashadaan Guryaha waaweyn iyo dhulka.
Guddiga Q/Midoobay ayaa Warbixintooda ku sheegay lacgao fara badan oo lagu kala wareejiyey Bankiga Salaad, kuwaasoo ka abdan 10,000 Doollarm taasoo ah xadka la rabo in faahfaahin laga bixiyo, isla markaana 24 saac gudahood laba accoun loo wareejiyay lacag dhan 322,000 Doolar.
JAWAABTA SALAAM BANK
Afhayeenka salaam Bank ayaa Wargeyska New York Times u sheegay inuu bankigu tallaabada ku haboon ka qaado tiro Akoonada la furto ah ee sameeya dhaqdhaqaaqyada laga shakiyo. Wuxuuna caddeeyay inay lasoo xiriireen Guddiga Q/Midoobay, balse aysan helin faahfaahin Akoonada la sheegay, sidaas darteedna aysan awoodin in tallaabo laga qaado iyo in kale.
Wasiirka Maaliyada xukuumadda Soomaaliya C/raxmaan Ducaale Beyle ayaa qirtay in Alshabaab ay si weyn u adeegsadaan hay’adaha Maaliyadda gudaha. Wuxuu intaas ku dtay inay la kulmaan Bankiyafa una sheegaan halista ka imaan karta arrintaasi.
Previous articleWadaadka Rusheeye Yare & koox Shayaadiin Kula ballansanaa Garoon Ciyaareed Oo la Baajiyey
Next articleWax ka baro luqadda sirta ah ee ay ku wada sheekeystaan haweenka